ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၅)
ဓါတ်ပုံပညာ မှတ်စုများ (၅)
Posted by Diamond Key on Dec 1, 2011 in Photography | 23 comments
ISO စိန်သော့ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်စု စိန်သော့ရဲ့ ရိုက်ချက်
Exposure မှန်ကန်တဲ့ ဓါတ်ပုံလေး တစ်ပုံအတွက် အရေးပါတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ISO (Speed) ပါပဲ။ ကျွန်တော် ကင်မရာ စကိုင်စဉ်တုန်းက ဖလင်ကင်မရာတွေရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်လေးကို မီခဲ့သေးတာဆိုတော့ ဖလင်ရဲ့အလင်းစွဲအားနုန်း Film Speed လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေတုန်းက ကင်မရာတွေ၊ ဓါတ်ပုံပစ္စည်းတွေ၊ Film တွေပေါ်မှာ ASA လို့ သုံးခဲကြ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ISO လို့ အမည်ပြောင်း သုံးလာပါတယ်။ ASA က American Standard Association ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ISO က International Standard Organization ဖြစ်ပါတယ်။ (ASA Speed = ISO Speed အတူတူပါပဲ)။
ဖလင်ခေတ်တုန်းက ဖလင်ဘူးပေါ်က ASA/ISO နံပါတ်
Digital Camera တွေခေတ်မှာ ISO
အခုနောက်ပိုင်း Digital Camera ခေတ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Digital camera တိုင်းရဲ့ ကင်မရာမှာ ပါတဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်း Sensor ( CCD or C-MOS) ရဲ့ အလင်းသိနိုင်စွမ်းအား Sensitivity of image sensor စံနုန်ုးကို ISO လို့သုံးလာပါတယ်။
ISO နံပါတ်တွေကတော့ ဖလင်ခေတ်က လိုပဲ ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800 စသည်ဖြင့် တွေ့ရပါတယ်။ အပါချာနဲ့ Shutter Speed မှာအတိုင်း နံပါတ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြောင်းအလဲကို One Stop လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခုခေတ် Digital ကင်မရာလေးတွေမှာ အများအားဖြင့် ISO 100, ISO 200, ISO 400 စသည်ဖြင့်ပါတတ်ပြီး ကင်မရာ အမျိုးအစား၊ sensor ရဲ့ အရွယ်အစား ပေါ်မူတည်ပြီး ISO နံပါတ် အနဲအများ အမျိုးမျိုးပါတာကို တွေရပါတယ်။
ဒီ Camera ဆို ISO 80 ပါတယ်။
အရင်ပြောခဲ့တဲ့ အပါချာ၊ Shutter တို့လိုပဲ ISO ကလည်း ဓါတ်ပုံအတွက် လိုတဲ့ အလင်းအနဲ အများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ISO နံပါတ်ငယ်ရင် အလင်းသိနိုင်စွမ်းနဲ (အလင်းဖမ်းယူနိုင်မှုနဲ) (ဓါတ်ပုံမှာအလင်းနဲ) ပြီး ISO နံပါတ်ကြီး ရင် အလင်းသိနိုင်စွမ်းများ (အလင်းဖမ်းယူနိုင်မှုများ) (ဓါတ်ပုံများအလင်းများ) ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့် နေရာမှာ အလင်းပမာဏနဲနေရင် ISO နံပါတ်ကို မြင့်ပေးရပြီး အလင်းများနေရင် ISO နံပါတ်ကို လျှော့ပေးရပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်ပါ။ ဒီပုံလေးကို အကောင်းဆုံး Exposure အတွက်f10 , 1/250s , ISO 100 နဲ့ရိုက်မယ်ရမယ် ဆိုရင် ISO ကို One Stop စီကြီးပေးလိုက်တဲ့အတွက် (ISO နံပါတ် မြှင့်ပေးလိုက်တဲ့ အတွက်) ပုံမှာ အလင်းများသွားပြီး ဖြူသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ISO setting ကလည်း ပုံတစ်ပုံကို ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်း ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။
အလင်းလိုလို့ ISO တင်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားရမယ့် အချက်က ISO နံပါတ်မြင့်လာလေ Digital Noice လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ပုံမှာ ဗြုတ်အစက်လေးတွေ ပေါ်လာလေ ဖြစ်တာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Film ခေတ်ကတော့ Grain လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်)။ Sensor Size ကြီးရင် ၊ ကင်မရာမှာ သုံးတဲ့ lens quality ကောင်းရင်တော့ noice ထွက်တာ နဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ISO ကို ဓါတ်ပုံအတွက် လိုအပ်သလို တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပုံမှန် အလင်းအားကောင်းတဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင် ISO 100 က အဆင်ပြေပါတယ်။
အလင်းအားနဲနေတဲ့ အချိန်၊ နေရာမျိုးတွေမှာတော့ ISO ကို မြှင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
အလင်းအား အရမ်းနဲတဲ့ အချိန်၊ နေရာမျိုးတွေမှာတော့ ISO ကို လိုအပ်သလို မြှင့်ယူရပါတယ်။
ကင်မရာတွေမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ရှေ့မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Aperture, Shutter Speed နဲ့ ISO တို့ကို လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပြီး အလင်းပေးရပါတယ်။ ဒီအချက် ၃ချက်က တစ်ခုအပေါ်တစ်ခု တည်မှီပြီး အချိုးတူညီစွာနဲ့ (One Stop တူညီစွာ) အလင်းကို လိုသလို အနဲအများ ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ (Auto Exposure Setting တွေက ဒီ ၃ ချက်ကို တွဲယူထားတာပါ)။
ဒီ အကြောင်းလေးတွေကို သိထားမှ ကင်မရာမှာကော၊ Flash တွေ၊ Exposure meter တွေလို ဓါတ်ပုံ Accessories တွေမှာပါ ISO နံပါတ် ဘဘောတရား ကို အသုံးချ နိုင်မှာပါ။
Exposure Meter ပေါ်က ISO
အခြေခံ တွေ ပြီးရင် advance တွေ ဆက်ရေးပါဦးဗျာ. အားပေးတယ်။ မျော်နေတယ်။
Landscape အတွက် . beginner အတွက် Exposure ကောင်းကောင်းလေး ရအောင် ပုံမှန် အသုံးများတဲ့ .. အဲ့သုံးခု အတွဲ အစပ် လေးတွေ .. သိချင်ပါတယ်။ နောက် color အတွဲအစပ် လေးတွေ လဲ . သိချင်ပါတယ်။ post တွေကို . copy ကူးပြီးသိမ်းထားပါတယ်.. ပြန်ဖတ်လိုက် စမ်းလိုက်လဲ လုပ်နေပါတယ်။
Beginner အတွက် Exposure အကြောင်း ဆက်ရေးပါ့မယ်။
အခြေခံ တွေ ပြီးရင် advance တွေ ဆက်ရေးပါဦးဗျာ ….အတွက်ကတော့ နော့ဆြာတွေ ရေးလိမ့်မယ်…..
(စိုင်ဖမ်းတဲ့သူက ဖမ်းနေတယ်၊ Creation ပုံတွေ ဖန်တီးသူက ဖန်တီးနေကြတယ်…မကြာမှီ လာမည်……မျှော် :D )
နော်က ဖိုတို မူကြိူ ပါ။ အတန်းကြီးတွေက ဆြာတွေ ဆက်မှာ
ISO က ဆိုင်ကယ်မှာလည်းပါတယ် အဲတာဘာအတွက်လဲ…နိူင်ငံတကာအသိမှတ်တံဆိပ်လား..ဘာလား
အဲဒါက International Organization for Standardization က သတ်မှတ်ပေးတဲ့ ISO 9001: 2008 Certificate တို့လို သင်္ကေတ ISO ပါ။ (သိသူများ ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။) ဓါတ်ပုံပညာမှာ သုံးတဲ့ ISO ကတော့ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်း Sensor ရဲ့ အလင်းသိနိုင်စွမ်း Sensitivity of image sensor စံနုန်ုး နံပါတ်ပါ။
ဆရာစိန်သော့ မှန်ဘီလူးတွေအကြောင်း ရေးဖို့ ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
မနေ့က ဆရာရေးတာ ဖတ်ပြီး ဆက်လာဖို့နော်စောင့်နေတာ။
ဖတ်ရတာလေးကောင်းလို့ အခုလို နော့်ကို ဝိုင်းပေးတော့ အားလုံး ပြည့်စုံတာပေါ့။
နော်တို့က application တွေရေးမယ်။ တို့ဆြာဂီက creations တွေ ရေးလိမ့်မယ်
ဆရာ့ဆီက model ရိုက်တွေ အားလုံးက မျှော်နေတယ်နော………….
ဟုတ်လယ် ဟုတ်လယ် …၁၀လုံးကျော် ဖျက်စီးလာခဲ့သူရီးဆိုတော့ …
တူပို သိဒယ် တူဘဲရေး သင့်ဒါ …..
တားတားတို့ ချာတိတ်တွေက ၄-၅လုံး အပြင် သိတာမဟုတ်ဝူး ….
သဂျီး ရန်ပုံငွေ စုပြီး ပြောင်းတွေ ၀ယ်ပို့ပေးရင်တော့
တားတား ရေးပေးပါ့မယ်.. ..အာဟိ..
ကိုစိန်သော့ရေ ဓာတ်ပုံပညာမှတ်စုများ ၁ ကနေ ၅ အထိ ကူးပြီးသိမ်းထားတယ်ဗျို့ ။ ခုမှပဲ ကင်မရာအကြောင်း သိတော့တယ်။ အရင်က ကင်မရာဆို ချိန်ပြီး ခလုတ်ပဲနှိပ်တတ်တာ။ ပညာတွေမျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကိုစိန်သော့ရယ် ကျမ ဒီ ISO အကြောင်းလေးကို ခုမှဖတ်မိတာ နောက်ကျသွားတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်ရွှေကျင် နှစ်တစ်ရာပြည့်မီးမျှောပွဲကို တကူးတက သွားပြီး ညကျတော့ ရေလယ်ကောင်မှာ လှေစီးပြီး တော့ကို ဓာတ်ပုံတွေ အားရပါးရ ရိုက်တာ နောက်ကြည့်လိုက်တော့ တပုံမှ ပုံကောင်းမရလို့ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ဖြစ်ရတယ်
ခုမှပဲ သိရတော့တယ် ကျမသုံးတာ ဆိုနီ ပါ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်တော့ ပြောင်းပြီး ရိုက်ခဲ့တာပါပဲ ဒါပေမဲ့ အဓိကကို နားမလည်တော့ စိတ်တိုင်းကျ ပုံကောင်းမထွက်ခဲ့ပါဘူး..
ရှားရှားပါးပါး ရောက်ခဲ့တာပါ.. နောက်သွားဖြစ်မှာလည်း မဟုတ်လို့ အလွန်နှမြောမိပါတယ်
လှတာမှ တော်တော်လေးကို လှတာပါ .. လှေစီးခါစက ညကြီး စီးရတာမို့ အရမ်းကြောက်နေပေမဲ့ ရေလယ်ကောင်မှာ မီးခွက်လေးတွေ ကြားထဲ ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်းကနေ မီးပန်းတွေလွှတ် .လေတွေက တိုက်နဲ့ အသဲတထိတ်ထိတ်နဲ့ကို လှေစီးရတာကို ပျော်သွားတာပါ..
အလှပြလှေတွေ ကတာတွေလည်း ရိုက်ခဲ့တာပါ လက်တွေကလည်း မငြိမ်တော့ ဘာပုံမှ မရခဲ့ဘူး…
ခုလိုလေး ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကိုစိန်သော့ရဲ့ သင်တန်းလေးတွေကို တက်ပြီး ကျမ နောက်ဆို ပုံကောင်းလေးတွေ ကြိုးစားပြီး ရိုက်ကြည့်ပါအုန်းမယ်
အဲလို ဖြစ်ဖူးတယ် ဗျာ… တစ်သသ နဲ့ကို နှမြော ရတာဗျ.. ဒါပေမယ့် အစ်မ ရယ် moving camera နဲ့ moving object ကို ရိုက်ဖို့လို့ဆိုရင် အရှိန်တူနေမှ နဲနဲ အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်နော်။ ပြိုင်ကားပုံတွေလိုလေ. ကားကလဲ မောင်းနေတယ် ဒါပေမယ့် ပုံထဲမှာ ပြတ်ပြီး ငြိမ်နေတယ်.. background မှုန်ဝါးဝါး blur နေတယ်.. အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ shutter speed နှေးလို့ ၀ါးသွားဖို့ အခြေအနေ ပိုများတယ်ဗျ။ နောက်ဆို သွားလေရာ Tripod သယ်ဗျာ.. ဘယ်သူဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်နဲ့ .. ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်လို့ ၀ါးနေရင် တနုံ့နုံ့ ဖြစ်တာ .. ဘယ်သူမှ သိတာဟုတ်ဘူးရယ်။ (ဟီး .. Tripod ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ် လို့ အထင်စေလိုပါ…) ISO များသွားရင်လဲ (5D-Mark2 တို့ 7D တို့ ဆိုတော့လဲ တမျိုးပေါ့လေ) entry,semi-pro level DSLR တွေမှာဆို .. 100% view ကြည့်လိုက်ရင် noise ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။ ဓတ်ပုံကတော့ ရိုက်သာရိုက် အစ်မ..ဒါ မှတ်တမ်းပဲ ..အစားထိုးလို့ မရဘူး.. ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်မြောက်ဖက်မုဖ် နဲ့ အောင်မြေ နားလေးက . ထန်းပင် ၃ ပင်နဲ့ . ဘုရားနဲ့ ကို wide နဲ့ ရိုက် ပြီး ဆုရတဲ့ ပုံ မြင်ဖူးတယ်။ အဲလိုပုံလေး လိုချင်လို့ သွားရိုက်တော့ ၂ ပင် မရှိတော့ဘူး .. ၁ ပင်ပဲ ကျန်တော့တယ်… :-( .. အရင် က ရိုက်ခဲ့မိရင် ကောင်းသားလို့ ..အဲဒါကြောင့် ရိုက်သာရိုက် အစ်မ . အားပေးတယ်…
စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ…………ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုး ကိစ္စလေးတွေ ကြုံဖူးတော့ ကောင်းကောင်းကို ကိုယ်ချင်းတာတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဓါတ်ပုံရိုက်သူတွေမှာ ပုံလေးတစ်ပုံ ရိုက်ဖို့ တစ်နှစ်စောင့်ရတယ်၊ ၂ နှစ်စောင့်ရတယ်ဆိုတာ pooch ကြုံရသလိုမျိုးပါ။
ကျွန်တော်လည်း ရွှေကျင်သွား ရိုက်ချင်နေတာပါ။ နောက်နှစ်သွားဖြစ်အောင် ကြိုးစားအုံးမယ်။
နောက်နှစ်များ ရွှေကျင်လာဖြစ်လို့ ချောင်းတစ်ဝိုက်မှာ ကင်မရာ တကားကားနဲ့ ခပ်ချောချော ခပ်ခန့်ခန့် (ကိုရီးယား မင်းသားလို) လူတစ်ယောက်များ တွေ့ဖြစ်ရင် ကိုစိန်သော့လား မေးကြည့်ပါ။ :D
ကြုံရင် ဆုံကြပြီး ကင်မရာ အကြောင်းတွေ မမောတန်း ပြောပြပါ့မယ်လေ။
ညအမှောင်ရယ်၊ ရေပေါ်က လှုတ်တုတ်တုတ်တွေကို လှေပေါ်ကနေ ရိုက်ရမှာကတော့ တကယ်အခက်ပေ့ါ။ ကောင်းတာကတော့ ကမ်းနဖူးပေါ်ကနေ M-Lulin ပြောသလို Tripod ထောက်ရင်တော့ ပိုကောင်းပေါ့။ (ဒါပေမဲ့ ပြောရအုံးမယ် Tripod သယ်ရမှာ နော်ဆို အတော်ပျင်းသဗျ။ :D )
မီးပန်းပါဆိုရင်တော့ “သဂျီး ရန်ပုံငွေ စုပြီး ပြောင်းတွေ ၀ယ်ပို့ပေးရင်တော့
တားတား ရေးပေးပါ့မယ်” ဆိုနေတဲ့ နော်တို့ ဆြာဂီ ကကျွမ်းလှသဗျ။
(သူက ပန်းတာတွေ ကျွမ်းတယ်၊ မီးလေးတွေ ပန်း (ဖြာကျနေတာ) ပြောပါတယ် :wink:)
ကျွန်တော်ဟာ ဟိုးအရင်တုန်းက ရွာထဲကို အမြဲလိုလိုဝင် ဖြစ်တယ် ပိုစ်တွေလဲတင်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ ၀င်ဘဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဘာကွန်မန့်မှ မပေးဖြစ်ဘူး။ တင်လဲ မတင်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
အခုမှ password ကို မေ့နေလို့ reset လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ရေးဖြစ်တာ.. ဒီ ကိုစိန်သော့တင်တဲ့ ဒီပို့လေးကို ကြိုက်လို့ရယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်လို့ရယ်ကြောင့် ပြန်ဝင်ရေးဖြစ်တာပါ။
အခုလို တင်ပေး/သင်ပေးတဲ့အတွက် ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟိုနေ့က မှ canon 550D လေးဝယ် IT Show က၀ယ်လာတာ။ ဘယ်လောက်ထိ ဝေးလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုင်ပင်တာ သူက body ကြည့်ဝယ်လိုက်တဲ့ သူ့ kit တွေက ပုံထွက်မကောင်းဘူး နောက်မှ မင်းကြိုက် တဲ့ lens ကို ၀ယ်တပ်လို့ရတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ body ကြည့်ဝယ်လာတာ။ အိမ်ရောက်တော့ မိန်းမကို ရိုက်ပြမယ်ဆိုပြီ ဗူးဖွင့်ကြည့်တော့မှ ဘာမှန်ဘီလူးမှလည်း မပါဘူး။ လုံးဝ ခေါင်းပေါက်ကြီး။ အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းဆီ ဖုန်းဆက်မေးမှ မင်းဘာလို့ lens မ၀ယ်တာလဲတဲ့။ ဒီ lens ဒီ lens ၀ယ်လိုက်လို့ အကြံပေးတာနဲ့။ သွားဝယ်ပြီး ဆိုင်ကလူကို တပ်ခိုင်းရတယ်။ အဲဒါမှ စပြီးရိုက်လို့ရတယ်။
ကိုယ်ကလည်း သူများလို ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ချင်တာ။ အဲတော့ နက်ထဲမှာ ရှာဖတ်။ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး နားလည်း မလည်ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုစိန်သော့ ရဲ့ ဒီ ဓါတ်ပုံပညာ ပို့တွေကို ဖတ်လိုက်ရတော့ မှာ အတော်ကို အဆင်ပြေလာတာ.. အစက သွားပြီ ဒီcamera ၀ယ်ပြီး ဘာမှာ မလုပ်တတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံသာကုန်သွားတယ် ငါဘာသာ ရိုးရိုး ဟာဝယ်ပြီး သုံးရင်လဲရရဲ့သားနဲ့လို့ စိတ်လေသွားတာ။ မိန်းမက အားပေးပါတယ်။ ဓါတ်ပုံမကောင်းရင်နေ.. ဟို ချက်ကလောက် ဆိုတဲ့ အသံလေးမြည်ရင်ပြီးတာဘဲတယ်။ သူက အဲဒီ အသံလေးကို ဘဲ ကြိုက်တာတဲ့..။း)
တတခါထပ်ပြီး ပြောချင်တာကနော်.. ကို စိန်သော့ ဒီပိုစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ အများကြီး သင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ နောက် မန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်က ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပြော ပြတော့ လွမ်းတယ်ဗျာ။
၅၅၀ဒီ သမားပေါ်လာပြီဆိုတော့ မန့်ပီဗျာ ….
ကျုပ်လည်း ၅၅၀ဒီ ကိုင်တယ်ဗျ ….. ၅၅၀ဒီ ကို ကမ္ဘာမှာ နာမည် ၃မျိုးနဲ့ ဖြန့်တယ်ဗျ..
ကျုပ်တို့ အရှေ့ကျွန်းမှာ kiss x4 ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖြန့်တယ် သဂျီးတို့ ယူအက်စ်မှာတော့ သူ့နာမည် Ribel T2i
global market ကိုတော့ 550D ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့ဗျာ…
kit lens တွေကို ဝေဖန်တာ ကိုတော့ နည်းနည်းထောက်ပြချင်တယ်ခင်ဗျ…
kit က အမျိုးမျိုးရှိလို့ပါ ….18-55mm kit, 18-135mm kit,
double lens kit တွေဆိုရင်တော့ 18-55mm + 55-250mm kit, 18-55mm + 50mm kit
စတာတွေ တွေ့ရမယ်ပေါ့ဗျာ ..(တခြား အတွဲအစပ်တွေလည်း ကျန်ပါသေးတယ်…)
ဆြာ့ သူငယ်ချင်းပြောချင်တာ 18-55mm + 55-250mm dual lens kit ကိုပြောချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ….
အသေးစိတ်ပြောရရင် 18-55mm က made in japan ပေမယ့် 55-250mm ကတော့
made in malaysia ဖြစ်ပါတယ်ဗျ …. ရုပ်ထွက် သိပ် မမိုက်ဘူးဆိုပေမယ့် zoom က အလွန်
powerful ဖြစ်လေတော့ ..(ကျနော်တို့ ASP-C sensor တွေမှာ 55-250mm က 88-400mm ဖြစ်လို့ပါပဲ
Crop factor လို့ခေါ်ပါတယ်) မဆိုးပါဘူးလို့ သုံးသပ်ပါတယ် ခင်ဗျား….. National Geographic ဒါ့ပုံဆြာ
လယ်ဗယ် မဟုတ်ရင် (ဒါမှမဟုတ်လည်း ချမ်းသာတာ) တော့ သုံးပျော်တဲ့ kit lens အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်းပါ…
နောက်တနည်း ပြောရရင်တော့ မကျွမ်းကျင်ခင် kit lensလေးတွေ(entry level လေးတွေပေါ့ဗျာ)
အနှီ ဈေးပေါတာလေးတွေနဲ့ သင်ယူလေ့ကျင့်(ဖျက်ဆီးပစ်ရင်း) ..ပိုင်နိုင်သွားတဲ့တနေ့ကျမှ
L Series lens တွေ အတွဲလိုက် ဆွဲနိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင်း…..
Wow!……………….ကောင်းလိုက်တဲ့ ရှင်းချက်……………. ပေါ်လာပီ :D … ပညာလေးတွေ ပေးအုံး
ကြားရတာ နားဝမှာ ချိုလှသဗျ …………ကိုမန်းသားရေ၊
ဓါတ်ပုံပညာကို ကျွန်တော်သင်ချင်လှ တုန်းက အကြောင်းလေးတွေများ ပို့စ်တစ်ခု ကြုံရင် ရေးပါအုံးမယ် ကိုမန်းသား မန်းတာလေးဖတ်ရမှပါ။
Canon 550D ကြီး ဝယ်ပြီးမှ ဘယ့်နှယ်ဗျာ …”သွားပြီ ဒီcamera ၀ယ်ပြီး ဘာမှာ မလုပ်တတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံသာကုန်သွားတယ် ငါဘာသာ ရိုးရိုး ဟာဝယ်ပြီး သုံးရင်လဲရရဲ့သားနဲ့” ဖြစ်ရတယ်လို့ ။ :D
လုပ်ပါနဲ့ ” ချက် “ကလေးလောက် နဲ့
ကနွန်ကြီးတွေဆို ဖုန်တက်တာက အစ တူတိတယ်။
myanmar pays says:
ကို MandalayThar ရေ ကျွှန်တော်ထက် အဖြစ်ဆိုးတဲ့သူတွေလဲ ရှိတာပါလား..သဘောကျတယ်ဗျာ။
ကျွှန်တော် DSLR ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်ကမှ မြင်ဘူး.တွေ့ဘူး.သိဘူးတာပါ။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာမှ Nikon D80 နဲ့ D800 နှစ်လုံးပါလာတယ်ခင်ဗျ။
D800 ဆိုတာ ဈေးကြီးတယ်ပြောလို့ (မလျှော်နိုင်လို့) D80 လေးနဲ့စကလိပြီး ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ ဟိုရိုက် ဒီရိုက် ရိုက်ကြည့်တယ်ခင်ဗျ။ D 80 မှာ ပထမ တပ်ထားတာက 18-55 အတိုလေးဆိုတော့
ရိုက်လိုက်တာ ပုံတွေ ကြည့်ထွက်နေလို့ သဘောတွေ ကျပေ့ါ။ နောက် 70-300 လန့်တခုလဲ ပါလာသေးတာဆိုတော့ တပ်ရိုက်လို့ ရလားဆိုတော့ သူက ရတယ်ဆိုပြီး ချိန်းပေးပါမယ်။ အပြင်ထွက်ရိုက်ဆိုပြီး
သူက ရေချိုးခန်း ၀င်သွားရောဗျို့။ အော် ကိုယ်ကလဲ သူရေချိုးမှာမို့ အပြင်ထွက်ခိုင်းတာလားမသိဘူးဆိုပြီး အပြင်ထွက် ဇွန်းကြီးဆွဲပြီး မရိုက်ရသေးဘူး ကြည့်ရတာနဲ့ကို အရသာတွေ တွေ့ပေ့ါ။
သူများ ကမ်မရာဆိုတော့ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ရိုက်ရမှာ အားလဲ နာသဗျ။ နှစ်ပုံလောက်ပဲ ရိုက်ပြီး အခန်းထဲပြန်ဝင်လာ။ ငါ့ပုံတပုံမှ မပါသေးဘူးဆိုပြီး မှန်ရှေ့ရပ် ကမ်မရာကြီး ချိန်ပြီး ရိုက်မယ်ကြံ့တော့
ကမ်မရာက ရိုက်မရဘူးဗျ။ ရှေ့က ပြောင်းကြီး တဂီးဂီးနဲ့ ဟိုဘက်လည်လိုက်.ဒီဘက်လည်လိုက်နဲ့ ဟာ ပျက်ပြီပေ့ါ..သူငယ်ချင်း ရေချိုးပြီး ပြန်ထွက်လာမှ နင့်ဟာ ရိုက်မရတော့ဆိုပြီး ပြောတော့ သူကရီပါတယ်။ ပြောင်းအရှည်ကြီးပြီး ကပ်ရိုက်လို့ မရဘူးတဲ့ ဖိုးကပ် ပြတ်မှ ပေးရိုက်တယ်တဲ့…ဖိုးကပ် ဆိုတာ အဲမှာစသိတာပဲ..(ဖိုးကပ်..တော်တော် ကပ်သီးကပ်ဖဲ့ နိုင်တဲ့ကောင်ပဲ)
တီလို့မြည်မှ ရိုက်လို့ သင်ပေးခဲ့တော့ တီလို့မြည်ရင် ရိုက်တက်လာတဲ့ အဆင့်ထိတော့ တက်လှမ်းခဲ့ပါပြီ.နောက်ပိုင်း ဒီဖိုရမ်မှာရော ကမ်မရာနဲ့ပါတ်သက်သမျှ ၀က်ဆိုက်.ဖေ့ဘွတ် အကုန်ဝင်ဖတ်
လေ့လာကြည့်တော့ အယ်ပါချာ.အိုင်အက်အို.ရှက်တာစပိ စသဖြင့် သိခဲ့ပေမဲ့ အယ်ပါချာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသံထွက်ဖို့ ကျွှန်တော်မှာ တော်တော်ဖတ်ယူလိုက်ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ မှာ သူမတူအောင် ထူးချွှန်သူမို့ အင်္ဂလိပ်စာ တစ်ကြောင်းလောက်ကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး အဘိဓာန်တွေ ဖွင့်ပြီး ဘာသာပြန် ဖတ်ခဲ့ပေမဲ့..တပိုဒ်လုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ဆိုရင်
ဆက်မဖတ်ပဲ ပိတ်ပစ်လိုက်တာများပါတယ်( ဆက်ဖတ်လဲ နားမှမလည်တာ)။ သူငယ်ချင်း နိုင်ငံခြားပြန်တော့ အဲဒီ့ D 80 လေး ကျွှန်တော်ဆီမှာ သောင်တင်လို့ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
D 80 လေးပဲကို ကလိရင်းနဲ့ပဲ တရက်ကျတော့ ကျိုက်ထီးရိုးဆိုတဲ့ မူဗီလေးတခု သွားတွေ့တယ်ခင်ဗျ။ အာကာ ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာရိုက်ထားတာပါ။ မူဗီကိုကြည့်ပြီးသဘောတွေကျလိုက်တာ။
အဲမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က DSLR ကမ်မရာနဲ့ ရိုက်ထားတာ ပြောတော့ ပိုပြီး လိုချင်မိတယ်။ အဲဒါနဲ့ မူဗီပါတွဲရိုက်ရင် ရမဲ့ ကမ်မရာအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီးလေ့လာ လိုက်တော့
ရှိစုမဲ့စုငွေလေးနဲ့လဲ ရနိင်မဲ့ Canon 7D လေးကို သဘောကျ. Canon 7D ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ထဲ လည့်ပတ်ရှာရင်းနဲ့ ရိုင်ရယ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးမှာ
Canon 7D ကို 18-200 လန့်လေးနဲ့ တွဲရမယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့. အနီးရော အဝေးရော ရမယ်..၀ယ်မယ်ပေ့ါ..ကျွှန်တော်စမ်းရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ ထုတ်ပေးပါတယ်။ရိုက်တဲ့။
ကမ်မရာကိုင်ပြီး ဇွန်းစဆွဲတော့ ဆွဲမရဘူး..အဲဒါနဲ့ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကမ်မရာကို ခေါင်းလန်ကြည့် ဖင်လန်ကြည့်နဲ့ ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဆိုင်ကကောင်လေးက အကို လော့ချထားလို့ဖွင့်လိုက်ဆိုမှပဲ။
ဘယ်နားမှာတုန်း ပြန်မေးယူရတယ်။အယ်ဇွန်းစဆွဲတော့ လန့်ကြီးက ရှေ့ထွက်မလာဘူး။ အဲ ဇွန်းဆုံးသွားလို့မသိဘူးဆိုပြီး.ဇွန်းပြန်ရှော့ မှ လန့်ကြီးက ရှေ့ထွက်လာတယ်။ အယ်ပြောင်းပြန်ကြီးတော့…
ဇွန်းကြီးဆွဲပြီး တပုံလောက် စမ်းရိုက်တော့ ပုံက မှောင်တောင်တောင် မိုးချုပ်နေမှကိုး..အဲတော့ ကမ်မရာကို လေ့လာထားတာကလဲ ပညာကလဲ စုံပြီဆိုတော့ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး
ဗျူးဖိုက်တာ မှာမြင်ရတဲ့ အလင်းအမှောင် အတုံးလေးတွေ ဘယ်ဘက်ထိ ကစားအောင် ရွှေ့ပြီး ရိုက်လိုက်တော့ ထွက်လာတဲ့ ပုံက မဲမဲကြီး..အန်..ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲပေါ့။ သေချာကြည့်မှ
ဘယ်ဘက်ကိုေ၇ွှ့မှ အနှုတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုး..ဂျပန်တွေကို ကျွှန်တော် တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။ ဂျပန်ခြင်းတူတာတောင် အကုန်ပြောင်းပြန်တွေ လုပ်ထားကျတယ်။
စာရေးကောင်းမယ့်လူပဲဗျ. မင်ဂလာပါ ပိုစ့်လေးဘာလေးတင်ပါအူးဗျို့
ဆရာစိန်ရေ ကူးထားလိုက်တယ်၊ဖတ်တော့မဖတ်ရသေးဘူး ပရင့်ထုတ်ပြီးမှ ဖတ်တော့မယ်၊ ၁ကနေ ၅ အထိကူးထားပါတယ်။နောက်လည်းဆက်ကူးပါဦးမယ်။ အပါချာနဲ့ ရှပ်တာစပိဆက်စပ်မှုလေးတွေ သေချာရေးပေးပါဦး။
ဘာမှ မရိုက်ဝူး …အိပ်နေတာ ..အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရ၀ူး
ဟိတ်လူရီးနော် ခညားမှာလည်း စိုင်တွေ ရှိတယ်. ….. မြည်းမယ် …ပြဦး ….
ဟိုလူရီး စိုင်တွေ ကလည်း ကြာထှာ…..
ကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ ကင်မရာလေးက ကိုပေ နဲ့ အမျိုးအစားရော မော်ဒယ်ပါ
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တူတယ်ဗျာ။ အိမ်သုံး ဒီဂျစ်တယ်လေးတွေဆိုတော့
ဒါတွေဖတ်ရင် ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလို ခံစားရပါတယ်ဗျာ။
အဲဒါကြောင့် ကြုံသလိုလေး ၀င်မန့်သွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။
ဆိုင်တာလေးတွေ တိတိကျကျ တွဲပြမယ်လေ…..ဆြာတို့ ကင်မလာကို ပြော… function လေးတွေနဲ့ တွဲတွဲ ရေးပြသွားမယ်။ :D
အခု စရင်းပေးထားတာ 500d တစ်လုံး ရှိတယ်။